How can I ensure I get accurate results from speed test? ﻿
How can I ensure I get accurate results from speed test?
ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ အင်တာနက်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးခြင်း (speed test) မှ တိကျတဲ့ results (ရလာဒ်) တွေ သေချာစွာရရှိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
အတိကျဆုံး broadband speed test result တွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်၊ အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်။
သင့်ရဲ့ PC/ laptop မှာ download များကို ပိတ်ထားပါ။
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုရတဲ့ software များ (ဥပမာ - အင်တာနက်ပေါ်မှ ရေဒီယိုများ၊ RSS news feed များ (သို့) TV ဝန်ဆောင်မှုများ) ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ wireless network ကိုမျှဝေအသုံးပြုနေရတဲ့ အခြားသောကွန်ပြူတာများ၊ Tablet များ၊ စမတ်ဖုန်းများနှင့် ဂိမ်း console များကိုလည်းပိတ်ထားပါ။
Broadband ကေဘယ်လ်ကြိုးများအားလုံးဟာ ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားမှုရှိနေဖို့ သေချာစစ် ဆေးပါ။
သင့်ကွန်ပြူတာနဲ့ wireless router တို့အကြား ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိမနေပါစေနဲ့။
Microwave မီးဖို၊ ကြိုးမဲ့ doorbell များ၊ ကလေးစောင့်ကြည့်ရေး monitor များ၊ ခြင်ဖမ်းဇကာ များနဲ့ လျှပ်စစ်စောင်များ အစရှိသည်တို့အားလုံးဟာ အင်တာနက် signal strength ကို သက်ရောက်မှုများရှိစေနိုင်တဲ့အတွက် ပိတ်ထားရပါမယ်။
အကယ်၍ သင်က mobile broadband မြန်နှုန်းကို mobile အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သည့် ကိရိယာ (dongle) သို့မဟုတ် laptop/ netbook တို့ပေါ်တွင် ပါဝင်တဲ့ mobile internet မြန်နှုန်းကို သွားရင်းလာရင်းနဲ့ စစ်ဆေးနေတာဆိုရင်တော့ သင်ဟာတစ်နေရာရာမှာ အထိုင်ချကာ ထိုင်နေဖို့နဲ့၊ အင်တာနက်လိုင်းမိတဲ့နေရာဖြစ်နေဖို့ကို သတိပြုပေးပါ။ သင်ဟာ ဒီစစ်ဆေးမှုပြု လုပ်စဉ်အတွင်း 3G ကွန်ယက်ရရှိနိုင်တဲ့နေရာမှ ဝေးကွာသွားပါက ရလာဒ်များကိုဖော်ပြသည့် အခါတွင် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်တဲ့မြန်နှုန်းထက်လျော့နည်းနေနိုင်ပါတယ်။
Broadband ရဲ့မြန်နှုန်းကို သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှ၎င်း၊ router နဲ့ဝေးကွာသောနေရာမှ၎င်း WiFi ပေါ်မှ တစ်ဆင့်မတိုင်းတာသင့်ပါဘူး။ laptop ကို router နဲ့ ကြိုးဖြင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးသာ တိုင်း တာသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ချိန်ညှိမှု (configuration) များကအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာကိုလဲ စစ်ဆေးကြည့်ရှုထားရပါမယ်။ သင့်ရဲ့ device ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်နေပါက မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်များကိုတိုင်းတာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။